Marco Verratti Oo Shaaciyay Hal Arrin Oo Sabab U Ahayd Inay Real Ka Reebto Kooxdiisa PSG Tartanka CL %
Marco Verratti Oo Shaaciyay Hal Arrin Oo Sabab U Ahayd Inay Real Ka Reebto Kooxdiisa PSG Tartanka CL
Marco Verratti, xidiga khadka dhexe uga dheela kooxda kubada cagta PSG, ee wadanka Faransiiska, ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay in maqnaanshaha Neymar kulankii lugta labaad oo ay Real Madrid la dheeleen ay sabab ahayd inay ka haraan Champions League.
Neymar, ayaa wuxuu ku maqan yahay tan iyo xiligaas dhaawac dhanka Qancowga ah, isagoona hadda ah mid wali garoomada ka maqan, kadib markii Qaliin lagu sameeyay, waxaana laacibkaan uu seegi doonaa kulamada ay PSG dheeleysa inta ka dhiman xagaagan.
Varratti ayaa sidoo kale, wuxuu ka hadlay wararka sheegay in wakiilkiisa, ninka lagu magacaabo Mino Raiola, uu ku qalqaalinayay ku biirista Barcelona sanad ciyaareedkii hore, isagoona si cad usheegay inuu isaga go’aan saday jooista Paris.
Isagoo la hadlayay wargeyska Talyaaniga kasoo baxa ee Gazzetta dello Sport, ayaa wuxuu yiri Verratti: “Waxaad arkhriyay [akhbaar] ku saabsan in Raiola uu iga dalbay ku biirista Barcelona – Taasi waa been aan sal iyo raad toona lahayn.
“Waxaan la hadlay macalimiin badan, waxay ogyihiin waxa aan ka fikirayey, waxyaabo badan waa ay iska cad yihiin – Aniga ayaa go’aan saday inaan sii joogo PSG,” ayuu hadalkiisa ku daray, laacibkaan udhashay wadanka Talyaaniga.
Mar uu ka hadlayey kulankii ay Real Madrid uga reebtay Champions League ayuu yiri: “Real Madrid waa koox aad u adag. Laakiin waxaan isku qancinay inaan cadaadino iyaga. PSG wax sidaas ubadan ma aysan ka dambeyn Real.
“Wax xoogaa farqi ah ayaa jiray. Waxaan sameyn waxyaabo badan lugtii koowaad, laakiin labada gool [ayaa farqiga keenay] – Sidoo kale, waxaan la’een Neymar, kaasoo qaadan kara doorka hadii ay Barcelona weyso,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.
Marco VerrattiReal Madrid
Hooyada Dhashay Xidiga Real Ee Ronaldo Oo Fariin Layaab Leh U Diray Mucaaradka Wiilkeeda